Umphumela Ophezulu kuGoogle ngeSemalt
I-inthanethi igcwele ngemininingwane. Iningi lethu ligcwele izincwadi, izindaba, imiyalezo esidinga ukuyihlola empilweni yethu yansuku zonke. Izinkulungwane zamawebhusayithi ahlala endaweni yedijithali, futhi amaningi awo ayizimbangi. Ngakho-ke singayenza kanjani impumelelo yebhizinisi kulezi zimo? Vele, ukukhushulwa kwidijithali kunemithetho yayo kanye naleyo, eyiqondayo kahle iwunqoba lo mjaho.
Ngaphandle kokungabaza, ukwenza ibhizinisi online kuhluke kakhulu kukho konke okwenzayo empilweni yangempela ukuze uthole imali futhi uzuze ukukhula kwebhizinisi lakho. Labo abafunda imithetho bangathola impumelelo. Ngakho-ke ukusebenzisa ukwenziwa kwewebhusayithi kusiza ukukhombisa izimpahla noma izinsiza zakho. Ibhizinisi lakho liyabonakala kumakhasimende angaba khona.
Kungabaluleka kakhulu kubanikazi bebhizinisi, ongoti bezokuxhumana komphakathi, kanye nabaphathi bezentengiso ukuze bafundwe ngezindlela ezintsha zokusebenzisa amathuluzi e-web ngempumelelo. Konke okwenzile ukuthola imali kungathuthukiswa ngomphumela ongcono.
Ukuthola usizo lobuchwepheshe lweqembu leSemalt, ibhizinisi lakho lingathola imiphumela ephezulu ye-Google futhi lifinyelele kwinzuzo obukade uyifisa.
Kungamathuba yini ukuthola imiphumela enyusa ibhizinisi lakho ku-Intanethi ngokwakho?
Lapha noma laphaya, sithola izindaba zamadoda nabesifazane abanenhlanhla abaye bathola imali yabo kalula kuWorld Wide Web. Kuyiqiniso, kuyakhuthaza ngempela. Kepha lezo zindaba ngokuvamile ziyimiphumela yenhlanhla emsulwa, ubuqambi noma ukuhlangana. Kepha ngabe uqinisekile ngemibono yakho emisha yokuphromotha ukusebenzisa imali enkulu kuyo? Ngabe uzoba namandla anele okuzifundela, usebenzisa isikhathi esiningi ngenkathi izimbangi zakho mhlawumbe zingasebenza nochwepheshe ukufeza izinhloso zabo? Uma ungazi kahle okufanele ukwenze, kuzothatha isikhathi esiningi ukuqonda ukuthi kusebenza kanjani. Uma kwenzeka ungakutholi konke okulungile, imali yephromoshini ibingasetshenziselwa ize.
Ungangeza ithrafikhi yakho ye-e-commerce ngaphandle kosizo olwengeziwe, futhi kungathatha isikhathi esingakanani? Ngaphandle kokungabaza, kubaluleke kakhulu ukuba nolwazi mayelana nokunyuswa kwe-inthanethi. Ungafunda imininingwane eminingi, uye kuma-webinars, uhlanganyele eqenjini noma izifundo ngazinye. Isinyathelo ngesinyathelo, uzothola imininingwane emisha evela emithonjeni ehlukene, kepha ngemuva kwakho konke, ungadumala ngomphumela. Imane nje imizamo yakho ibingakwaneli ukuhlela konke kahle. Kulesi simo, ibhizinisi lakho lizolahlekelwa ngamathuba wokukhula amasonto nezinyanga. Wonke umuntu kufanele acabange kabili ukuthi yini ebaluleke kakhulu kubo kuleli cala. Ngabe kufanele bawemukele lomnotho we-phantom, noma kufanele batshale imali yabo esikhathini esizayo ngokuhlakanipha ukuze bathole umphumela ngokushesha nangendlela efanele?
Amathuluzi wokuxhumana nge-Intanethi ebhizinisini lakho
Namuhla, izitolo eziku-inthanethi sezidume kakhulu. Abantu bangahlala ekhaya futhi basebenzise isikhathi sabo ngokuhle ngesikhathi sokuthenga kwabo okubonakalayo, bethola izinto ezibonakalayo empilweni yangempela. Ungathenga izimpahla nezinsizakalo kunoma iyiphi ingxenye yeplanethi yethu, futhi kungenzeka ngokushesha okukhulu njengoba kwenzeka eminyakeni edlule. Kulezi zimo, kubaluleke kakhulu ukwenza insiza yakho iphelele, iphephe, unake wonke umuntu futhi ubasize baholele ekukhetheni okungcono. Futhi ungakhohlwa insizakalo esetshenziswayo ngemuva kokuthengisa.
Ungasabela kanjani uma abantu abaningi kakhulu bevakashela isayithi lakho futhi bedinga izimpendulo zemibuzo yabo? Kufanele namanje ubenze bajabule ngesitolo sakho esiku-inthanethi. Kuyadingeka ngempela ukuba namakhasimende ajwayelekile noma nabalandeli bomkhiqizo. Yingakho abanikazi bamabhizinisi kudingeka basebenzise amathuluzi eSemalt SEO ngosizo lochwepheshe abanamakhono. Njengoba wena nethimba lakho anikwazanga ukuba nesikhathi esanele sokunikeza usizo nokusekelwa kumuntu ngamunye uma kukhona abaningi kakhulu. Abantu abathandi ukulinda, ngakho-ke osomabhizinisi kumele basibone kusengaphambili lesi simo futhi basebenze ngaso nabachwepheshe kusengaphambili.
Ukwakha isu lokumaketha elihlakaniphile kunoma yiluphi uhlobo lwebhizinisi, udinga ukufaka isabelomali samathuluzi anamandla futhi asebenzayo we-SEO. Kuzokwenza umphumela wesikhathi eside nezeluleko ezithile ezivela kubaluleki bethu.
Izinhlobo ezahlukahlukene zesabelomali ziyatholakala ukuze noma ngubani akwazi ukukhetha eyodwa efanelekile. Ungaheha abathengi abadinga umkhiqizo wakho ngosizo lwabo usebenzisa amanye amaqhinga wokuthengisa, vele.
Ngabe ucabanga ukuthi kulula ukuthengisa? Kuhle ukuthenga izimpahla esitolo online okwenziwe ngokuhlakanipha. Kungaba lula ukuthengisa uma udala isu elizokuphakamisa. Thola izinzuzo, cela izeluleko, nosizo kubantu abakwenze ngempumelelo izikhathi eziningi. Uzokhulisa ukuthengisa kwakho futhi uthole ibhizinisi elizinzileyo namakhasimende, azokweluleka ngezinsizakalo zakho. Hlala uxhumekile, bonisa izinzuzo zakho, bese wenza abathengi abangahle babe nentshisekelo.
Insizakalo yeWebhu ye-Semalt
Ngosizo lwamathuluzi aku-inthanethi, imali engenayo izonyuka. Kuzokwenzeka ngoba iwebhusayithi yakho izokwazi ukuhlanganyela abantu abasha abaningi, kepha kuzoba ngamakhasimende aqhamuka esifundeni esisodwa. Ngecebo elakhiwe ngungoti we-Digital Agency yethu, ungafinyelela ezinye izifunda, amazwe, kanye nezingxenye zomhlaba wethu. Ngakho-ke uSemalt akagcini nje ngokuhlinzeka ngamathuluzi we-SEO kodwa futhi athuthukisa isu lokusiza ibhizinisi lakho ukusebenza emhlabeni wonke futhi lidume. Singakwazi ukuthuthukisa amakhono enjini yokusesha. I-Agency yethu inikezela ngosizo lochwepheshe ekukhetheni amagama angukhiye afanisa kahle umsebenzi webhizinisi lakho.
ISemalt izokuvumela ukuthi uthole imininingwane efanele mayelana nezimbangi, idatha engaguquki mayelana nengxenye yemakethe noma imboni yakho. Kuzokwazi ukubheka amamethrikhi kwimidiya yezenhlalo, ukuthuthukisa imizamo yakho nokuba khona kwakho ngokusho kwayo.
I-SEO izobaluleka ngempela kuleli khulu leminyaka. Ukutshala imali efanelekayo nokubambisana kwansuku zonke, umnikazi webhizinisi uzothola inkampani ekhula njalo. Umkhiqizo wakho uzothola i-organic traffic ngezinjini zokucinga. Amaphutha webhizinisi langaphambilini azoqedwa ngoyedwa. Vele, akekho ophelele, ukwehluleka okuncane kungenzeka, kepha isu lokuthengisa eliqinile lizoholela inkampani empumelelweni.
Ukuthuthuka kwezentengiselwano zedijithali kanye ne-Intanethi bekuyisizathu sokubukeka kukaSemalt. KwakungoSepthemba 2013 lapho abantu abambalwa abanobuchule, abanethalente benquma ukuba yiqembu. Futhi babengabasunguli beSemalt abadale isimangaliso. Kulezi zinsuku inkampani ifundile, abasebenzi abanamakhono namakhasimende anelisekile emhlabeni wonke jikelele, esiza abantu ukuthi bagcwalise amaphupho abo.
Yini onayo ukuthola ibhizinisi lakho kulezi zinsuku? Awudingi ukuvakashela i-gypsy noma ulinde emugqeni. Ukuphela kokufanele ukwenze ukuxhumana nezingcweti zethu ze-Digital Agency futhi uthathe izinyathelo ezithile zokukhulisa ibhizinisi lakho. Kuzoba wusizo noma ngabe ukuphi nokuthi ubuzwe bakini. Uma ufuna ukulindwa ngokweqile ngezingcingo nama-imeyili avela kumakhasimende, khulisa ukuthengisa kwakho, futhi uthole inzuzo emsebenzini wakho, vele uqhubeke nokufunda.
Uyasaba ukuthi kungenzeka ungaqondi amathuluzi we-Semalt SEO? Amakhasimende ethu avela emazweni amaningi ahlukene, ngakho-ke abasebenzi bethu bazokhuluma nawe ulimi olukhethile. Woza lapha ukuhlola uhlu lwezilimi. Amakhasimende ethu asithumelela amazwi okubonga ngokuwasiza ukuthi athuthukise futhi achume:
UMSEBENZI WOKUZIPHATHA (Isikhungo Sese- Apple Service). Isebenzisa uSemalt FullSEO, le nkampani (ese-Ukraine) inyuse ithrafikhi yayo ephilayo ngamaphesenti angama-300 ngaphansi konyaka!
Zaodrasle.si. Izinyanga eziyishumi zokusebenzisana noSemalt zavumela lesi sitolo sex online esisekelwe eSlovenia ukukhulisa ithrafikhi ephilayo kwiwebhusayithi yabo ngo-520%. Njalo ngenyanga isibalo sokuvakasha sikhuphuka ngo-1216. Ngenxa yalokho, iZaodrasle.si manje isiyinkampani ehamba phambili yaseSlovenia esigabeni sayo semakethe.
Ingosi yokusesha nokuthenga ama-franchise. Iphakheji ye-FullSEO inike amandla leli bhizinisi ukwandisa inani lamagama asemqoka e-Google TOP-10 laya ku-5782, ngaleyo ndlela ikhula i-organic traffic yayo ngama-303% ezinyangeni eziyi-9 nje. Namuhla, le nkampani ingenye yamagama avelele embonini yamasheya e-UK.
Uyayisebenzisa i-Intanethi? Ngemuva kwalokho uzokwazi ukuthi iyini injini yokusesha. Usebenzise eyodwa noma eziningi zazo. Phakathi kwezinhlobonhlobo, iGoogle iyona enkulu kunazo zonke. Isebenza kanjani? Uthayipha igama noma amagama okusesha, chofoza u-'sesha, 'bese injini yokusesha ikubuyisela uhlu lwezindawo ezitholakele. Kungani abanye bemigqa ephezulu yemiphumela, kanti abanye baphansi ohlwini? Izibalo zisitshela, iningi labasebenzisi libheka kuphela izikhundla eziphezulu. Ukuze ube lapho, udinga ukungena ku-TOP-10. Ukukhonjiswa phezulu kwemiphumela yokusesha, udinga ukuthatha izinyathelo, ezizothuthukisa isikhundla sakho ohlwini lwemibuzo.
Amathuluzi ethu we-SEO
Onjiniyela bakwaSemalt abangochwepheshe ekwenzeni isiza sakho sibonakale esimweni sokuqala ku-Google TOP 10. Uma ulapho, ukuthengiswa kwakho kuthengiswa nokuthengisa online kuyothuthuka. Izibalo aziqambi amanga - ibutho labasebenzisi be-Intanethi liyakhula usuku nosuku. Njengamanje, ngaphezu kwengxenye yesithathu yabantu abasemhlabeni bakwi-Intanethi. Udinga ukuheha laba bantu, ngoba unebhizinisi, futhi linemali yokusebenzisa. Izinkulungwane nezinkulungwane zabasebenzisi zifuna impahla efana neyakho kumawebhusayithi wezimbangi zakho. Abaqhudelana bakho abanejubane bahlose ukuthatha izikhundla ezinhle kakhulu kwimiphumela yosesho. Kungani ungenzi? Ufanelwe ukuba lapho - ngakho-ke nikeza impilo kuwebhusayithi yakho ngokusebenza kweinjini zokucinga.
Abantu bayawathanda amavidiyo! Singakhombisa okwenzayo kuvidiyo yokuphromotha epholile. Izokulethela amakhasimende amasha futhi ikhule ukuguqulwa kwakho!
Ukuhlaziywa kwesayithi lezentengiso
Emhlabeni wethu osheshayo, enye yezinto ezibaluleke kakhulu imininingwane. Uma uyithola ngesikhathi, ungazilungisa izinyathelo zakho futhi ugweme amaphutha abuhlungu. Enye yezindlela zokulawula ukuthuthukiswa kwebhizinisi lakho ukubheka idatha yethu yokuhlaziya nokubikezela inqubekela phambili yesikhathi esizayo. Thola imininingwane yenhloso ku-inthanethi nochwepheshe bethu.
Cabanga nje, cishe ezinkulungwaneni eziyizinkulungwane ezintathu zabantu kungaba ngamakhasimende akho ngokuzayo. Manje kungani bengayi ezitolo online manje? Kuyisihawu, kepha amakhasimende akho angahle aphazanyiswe yizigidi zabathengisi abaqhudelana nawe ekubambeni abathengi nemali yabo. Lezo izimbangi azikuvumeli nje ukuthi ungene ku-Google Phezulu. Ukuze ube ngumnqobi kulo mjaho ongapheli, kufanele ukhethe iqembu eliqeqeshiwe kakhulu elizosebenza nalo.
Ngokubambisana noSemalt, ungathola izindlela ezintsha zokuthuthukisa ukumaketha kwakho. Singahlela inkonzo ephelele yokwamukela konke engafaka: ukuthuthukiswa kwesitolo online, ukuhlela kabusha kanye nokuphromotha kanye nokuxhaswa okuhle kwezobuchwepheshe. Xhumana nabaluleki bethu futhi uzuze imiphumela enesibindi kunazo zonke ngochwepheshe beSemalt!
Kungani abantu besikhetha?
Ngesikhathi sokubambisana neDijithali yethu, ochwepheshe bethu bazokusekela amahora angama-24 ngosuku, izinsuku eziyi-7 ngesonto. Bazokuqonda imininingwane emincane kakhulu yebhizinisi lakho eliku-inthanethi.
Sivele sisebenze ngempumelelo ngaphezulu kwama-800 000cases futhi siwaqedile. Sisebenzisane namakhasimende angaphezu kwama-300 000. Ungahlola wonke amaphrojekthi kuwebhusayithi yethu.
Intengo evumayo yomphumela omuhle kakhulu
Amakhasimende ethu ayalazisa ikhwalithi yomsebenzi wethu maqondana namanani aguquguqukayo nokunikezwa kwentengo ekhangayo.
Ukusebenziseka ngokuphelele kwezinjini zokucinga
Okokuqala, iphrojekthi yakho izoba nemenenja yomuntu ozobhekana nazo zonke izinqubo esizinikezayo. Sizoqoqa imininingwane ephelele mayelana nezimbangi zakho ngaphambi kwesikhathi. Isakhiwo sendawo sizohlaziywa. Ukuze kudonsele izethameli eziqondiwe, ithimba lethu le-SEO lizocosha amagama asemqoka afanelekile kanye namakhasi wokuphromotha wemishwana efanele. Iwebhusayithi yakho izohlolwa izihlungi zeGoogle. Ochwepheshe bethu bazothuthukisa ngokucophelela isu lokuqhubeka nokwenza okuthile
Zimbalwa izeluleko zokwandisa isisetshenziswa online
Siluleka kakhulu ngokusebenzisa lezi zincomo. Kuzokwenza ibhizinisi lakho lincintisane kakhudlwana. Iwebhusayithi yakho izogwema imikhawulo, futhi ukukhuthaza kwakho kuzosebenza ngempumelelo.
Ukubheka futhi uhlele ikhodi ye-HTML ukuyenza iphelele;
Ukwakha amathegi nezimfanelo ezihlobene nezinjini zokusesha ezijwayelekile;
Ukwenza amathegi e-meta usebenzisa amagama angukhiye.
Ukunikeza ukusebenza kahle, sivala izixhumanisi eziphukile. Futhi, sakha izixhumanisi eziningi ngangokunokwenzeka ezinsizeni ezikhuthaziwe. Kubaluleke kakhulu ukuhlela amafayela we-robots.txt nama-.htaccess. Lesi senzo sizonikeza umthelela omuhle ekubonakaleni kwewebhusayithi yakho kwizilinganiso zenjini yokusesha.
Mhlawumbe kunamagama amasha amaningi kakhulu namagama angaziwa? Asifuni ukuthi udideke kakhulu. Kepha akulula kangako ukuthandwa ku-World Wide Web. Kudinga ulwazi olukhethekile kanye nesipiliyoni sempumelelo yamaphrojekthi wangaphambilini. Ngokubambisana neqembu lethu lochwepheshe abahle nabanobungane, uzothola umkhankaso onamandla we-SEO. Iwebhusayithi yakho izobonakala kumakhasimende nakubantu abanentshisekelo kumasevisi wakho noma izimpahla ngosizo lwethu.
Akunandaba ukuthi uhlala kuphi noma yiluphi ulimi olusebenzisayo ukukhuluma. Ungaba nanoma yiluphi uhlobo lwebhizinisi, futhi sizokutholela isisombululo. Indawo yokubhaka yendawo noma ukusatshalaliswa kwemoto, noma yiliphi ibhizinisi lingakhazimula. Zama ukuthuthukisa ibhizinisi lakho ngeDijithali yethu futhi uzuze imiphumela emihle!